Inzuzo - Andeli Group Co., Ltd.
Senza i-100% yemizamo yethu ocwaningweni lobuchwepheshe nokwandiswa kolayini kwemikhiqizo kagesi ye-LV ne-HV ehlobene kuphela. Ngokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-10, sinolwazi oluyisisekelo lobuchwepheshe bemikhiqizo kagesi neye-elekthronikhi nezinkulungwane zemikhiqizo ejwayelekile yokukhethwa kwamakhasimende.
Sihlala sinamathisela ukubaluleka okukhulu kunekhwalithi kunenani. E-Andeli, wonke umkhiqizo kufanele uthobele inqubo eqinile nephelele kanye nokujwayelekile kusuka ocwaningweni, ekwakhiweni, kumodeli, ekukhetheni izinto, ekukhiqizweni kokuhlolwa, ekukhiqizweni, ekulawulweni kwekhwalithi. Kwezokuphatha, sinesistimu yokuphatha esebenza kahle ngekhompyutha kusuka ekutholeni ama-oda emnyangweni wezentengiso kuya ekuthunyelweni kwemikhumbi ukuqinisekisa insizakalo yethu engcono kakhulu kumakhasimende ethu.
Siyaqaphela ukuthi imikhiqizo kagesi idinga ukuhlangabezana nezidingo zohlelo lokusebenza ngemishini yokugcina yekhasimende. "Ukwaneliseka Kwekhasimende" kungamandla akhuthazwayo okukhula kwesikhathi esizayo kuka-Andeli. Sikholwa ngokuqinile ukuthi uzokwanelisa izinsizakalo zethu eziphelele, noma ngabe kunesimo sini, isikhathi sokuphendula, ukunikezwa kolwazi ngaphambi kokuthengisa, ukwesekwa kwezobuchwepheshe, ukulethwa ngokushesha, izinsizakalo zangemva kokuthengisa, kanye nenkinga yesimangalo sekhasimende.
Sigcizelela ukuphathwa. Ngakho-ke, ngokuqhubekayo sisebenzisa ukucabanga, ukubeka imigomo kanye nokwenza ikhompyutha kukho konke ukuhamba komsebenzi ukuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi wethu. Kwa-Andeli, isisebenzi esisodwa imvamisa singakwazi ukukhokhela umsebenzi abasebenzi be-2-3 abalayisha kwezinye izinkampani. Yingakho singanciphisa izindleko zethu eziphelele futhi sehlise inani kumakhasimende ethu minyaka yonke.
Siyabona ukuthi abantu bayimpahla ebaluleke kakhulu. Khathalela ukuzikhulisa kwabasebenzi, unikeze ngohlelo olufanele lwemfundo, wakhe indawo yokufunda kanye nomoya wokuqamba kabusha unika amandla okuthuthuka ekukhuleni kwethu kwesikhathi esizayo.
Namuhla, u-Andeli ube ngomunye wabakhiqizi abahamba phambili eChina, ikakhulukazi ngohlobo olujwayelekile lwensimu kagesi. Indawo yethu yokugcina impahla engu-500M2 isivumela ukuthi sigcine amasheya anele angama-30% amamodeli ajwayelekile wokulethwa ngokushesha. Siphinde futhi sinikeze insizakalo eyenziwe ngamakhasimende (i-ODM) engakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile zokucaciswa kwamakhasimende ngesikhathi esifushane sokukhulisa.
Njengamanje, sinabasabalalisi abangu-10 abakhethekile nezinkulungwane zamakhasimende ajwayelekile atholakala emazweni angama-50 emhlabeni jikelele. Ngokuya ngesipiliyoni seminyaka engu-18 sokuklama, ukukhiqiza nokumaketha emkhakheni kagesi, sikholelwa ngokuqinile ukuthi singaba umlingani wakho ongcono futhi onokwethenjelwa kuze kube phakade kulayini.
Ekugcineni, singathanda ukwazisa ukusekelwa okwedlule okuvela kumakhasimende ethu emhlabeni wonke ukuthi abe yi-Andeli yanamuhla. Silindele ukuthola ukwesekwa kwakho okuqhubekayo futhi singaba umlingani wakho ongcono futhi onokwethenjelwa kuze kube phakade.